Ajụjụ iri na abụọ maka imepụta peeji ụlọ | Martech Zone
Ternyaahụ, mụ na ya nwere mkparịta ụka mara mma Gregory Noack. Isiokwu nke mkparịta ụka ahụ dị mfe mana ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla… peeji nke obibi. Ebe obibi gị bụ peeji nke mbụ maka ndị ọbịa na saịtị gị, yabụ ọ dị oke nkpa na ị haziri ya nke ọma.
Ugbu a anyị na-emejuputa saịtị ọhụrụ maka ụlọ ọrụ anyị na Greg welitere ụfọdụ isi ihe ndị na-eme ka anyị gbanwee ụfọdụ nke oyiri na ihe anyị. Echeghị m na ịdepụta ndepụta ndepụta nke ntuziaka maka imepụta peeji nke ụlọ kwesịrị ekwesị ka m dee ụfọdụ ajụjụ nwere ike iduga gị nye azịza ziri ezi. Greg kwesịrị ka otuto dịrị ebe a ma tufuo m nke aka m.
Ibe obibi gị nwere ike ịchọ ihe ndị dị iche na nke anyị nyere ndị na-ege anyị ntị na nzaghachi anyị na-achọ n'aka ndị ọbịa.
Kedu mgbe ndị mmadụ na-eleta ibe gị? Ọ bụ tupu ha ezute gị? Mgbe ha zutere gị? Kedụ ka ị ga - esi wee gbanwee ozi maka onye maara gị na ndị na - amaghị ya? Kedụ ka ị ga - esi na - agwa ha abụọ okwu ọfụma?
Gịnị bụ echiche mbụ? Ọ bụrụ na i mefuola ego na peeji nke ụlọ gị karịa nke kachasị mma n'uwe azụmaahịa gị, ma ọ bụ n'ọnụ ụlọ ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ ụgbọ ala ị na-anya iji nweta atụmanya gị… gịnị kpatara ya? Mmetụta adịghị abịa site na uwe ahụ, n'ọnụ ụlọ ogologo ma ọ bụ ụgbọ ala page peeji nke ụlọ gị na-ezukọ ma na-ekele ọtụtụ ndị ọbịa karịa gị.
Gịnị bụ ahụmịhe onye na-agagharị agagharị? Ikekwe onye ọbịa gị na-achọ ịkpọ gị ma ọ bụ gaa na ọfịs gị… yabụ ha jiri ekwentị mkpanaaka gaa na peeji nke obibi gị. Ha ga-achọta gị?
Ndị ọbịa gị ọ ga-amanye iji foto ngwaahịa ma ọ bụ foto omenaala? - mgbe anyị gbanwere weebụsaịtị nke nnukwu data center na midwest ka omenala foto site na Paul D'Andrea, ọ gbanwere ahụmahụ weebụ ma mee ka ọtụtụ ndị ọbịa banye na njegharị. Njegharị na-eduga ndị ahịa.
Ndị ọbịa gị ọ na-amasị ihe ndị ị rụzuru ka ọ bụ nke ụlọ ọrụ gị? - Akwụkwọ MBA ma ọ bụ asambodo ndị ọkachamara nwere ike inye onye ọbịa nnukwu ihe akaebe nke ịtụkwasị gị obi… mana ọ dị mkpa itinye ya na ibe obibi? Jiri ala ahụ kwuo okwu banyere ihe ụlọ ọrụ gị rụzuru na ndị ahịa gị.
Kedu ihe nọmba 1-800 na nọmba ekwentị mkpanaaka na-agwa gị banyere ụlọ ọrụ ahụ? - Ọtụtụ n'ime anyị na-ehie ụzọ na nchekwa nke ụlọ ọrụ isi ekwentị akara… mana chee ihu na ịnwe nọmba ekwentị nkeonwe onye ị chọrọ ịchọrọ n'ezie. ọ bụghị nke ahụ na-ekwenye ekwenye?
Kedu nke dị ike - nleba anya ma ọ bụ atụmatụ? - ọzọ… nke a bụ ebe obibi gị. Ọ bụ gị ohere mbụ iji nweta ntụkwasị obi nke a esenowo. Therkọ banyere atụmatụ gị ma ọ bụ jiri ha tụnyere ndị na-asọmpi gị enweghị isi ma e jiri ya tụnyere ndị isi na ụlọ ọrụ ndị isi na -ekere ndị ọbịa ọhụrụ ha akaebe.
Emeziri ndokwa ụlọ gị ka o kwekọọ n'agụ omume ọgụgụ onye ọbịa gị? Nlebara ndị ọbịa na-amalite n’elu akaekpe, mgbe ahụ n’elu aka nri, wee gbadata peeji ahụ. A isi aha ekpe, isi ozi kọntaktị n'aka nri… wee ọdịnaya na akwusila gị esenowo.
Na 2 sekọnd, gịnị ka onye ọbịa maara banyere gị? Isi isi okwu dị ebe ahụ? Hà ma ihe azụmahịa gị na-eme? Nke a bụ nnukwu ihe nwalee. Mepee laptọọpụ gị na ndị folks ole na ole na-ahụbeghị saịtị ahụ, mechie ya mgbe sekọnd 2, jụọ ha ihe ị na-eme.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrụ ọrụ n’ụdị ụfọdụ na nha ndị ahịa, enwere ndị atụ dịka ndị ahịa edepụtara? Ili otu onye ahịa ma ọ bụ ikwupụta na ị na-arụ ọrụ na azụmaahịa Fortune 500 enweghị nnukwu mmetụta dị ka ịdepụta akara ngosi nke ụlọ ọrụ ndị ahụ na ibe gị. Ọbịa nwere ike ntabi-atụle ma ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị dị ka nke ha site na ị na-elele ụlọ ọrụ ndị ị na-arụ ọrụ… nwere ụfọdụ logos elu!
Kedu ihe ị chọrọ ka ọbịa wee mee ọzọ? Ha rutere… ha hụrụ gị… ugbu a gịnị? Ikwesiri ịgwa onye ọbịa gị ihe ị chọrọ ka ha mee ma gwa ha ka ha mee ya ozugbo.
Kedu nhọrọ ndị ọzọ enwere? Ọ dị mma… ha adịghị njikere ịwelite ekwentị ahụ, mana ha nwere mmasị. Ha enwere ike ịdenye aha maka akwụkwọ akụkọ? Download ebook? Gụọ blog gị? Soro gị na LinkedIn, Twitter, Facebook ma ọ bụ Google+? Na-enye nhọrọ ndị ọzọ dabere na ebumnuche nke onye ọbịa?
MARA: Greg Ebe E Si Nweta Seth Chinekein maka nghọta na ibe obibi… mana ekwenyere m na nghọta Greg na ịkọ akụkọ na-agbakwụnyekwu nkọwa na mkparịta ụka ahụ.
Tags: ihe maka homepagen'ụlọ peejihomepagemmebe ụlọhomepage ọcha
Feb 19, 2013 na 1:45 PM
Hụ nke a n'anya! Karịsịa ebe ọ bụ na mụ na onye ahịa dị ugbu a na-ajụ ọtụtụ ajụjụ ndị a. 🙂
Feb 19, 2013 na 5:31 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ajụjụ a bara uru.
Naanị ịgbakwunye, ọ bụrụ na enwere ebumnuche ntụgharị maka homepage, azụmaahịa kwesịrị ịnwale mgbe niile ụdị ozi na-eme ka mgbanwe ndị ọzọ gbanwee maka azụmaahịa ahụ. Omume oku di iche-iche, onyinye ntinye aka, onyonyo, isi okwu, uru ndi elebara anya, ndi mmadu elebara anya na otutu ndi ozo bara uru.
Feb 20, 2013 n’elekere 8:32 nke abali
Nke a bụ ndepụta dị mma nke ajụjụ onye ọ bụla nwere ebe nrụọrụ weebụ na-azụ ahịa kwesịrị ịgafe ma zaa ajụjụ ọ bụla n'ime ha. Nke a ga - eme ka ahụmịhe ka mma na ọtụtụ weebụsaịtị azụmaahịa dị na ịntanetị. Daalụ maka itinye ihe a ọnụ, Douglas.